Ala ọma jijiji nke Ecuador n'ụtụtụ a: 6.0
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Ala ọma jijiji nke Ecuador n'ụtụtụ a: 6.0
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ala ọmajiji ji ike izizi nke 6.0 ruru na nso obodo Ecuador.
Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịdị Ala nke United States na-ekwu na ebe etiti ahụ dị ihe dị ka kilomita 20 (kilomita 12.5) site na Bahia de Caraquez. Ala ọmajiji a, nke nwere omimi nke 24 kilomita (ihe dị ka 15 kilomita), mere na 1120 GMT (6: 20am EST) Sunday.
Bahia de Caraquez dị ihe dị ka narị kilomita atọ na iri abụọ (360 kilomita) ọdịda anyanwụ nke isi obodo Ecuador, Quito.
Ruo ugbu a enweghị mmerụ ahụ ma ọ bụ mmebi na mba South America.
20.1 km (12.5 mi) NE nke Bahía de Caráquez, Ecuador
31.6 km (19.6 mi) NW nke Chone, Ecuador
33.8 km (21.0 mi) N nke Tosagua, Ecuador
42.1 km (26.1 mi) NNW nke Calceta, Ecuador
65.9 km (40.8 mi) NNE nke Portoviejo, Ecuador